nhabvu chinhu kupikiniki gumbeze - China Green Camping Products
Beach tende / pekugara
Kungofamba uye war tende
Double akura akarara bhegi
akarara bhegi Military
Sleeping bhegi liner
mifananidzo inokukurudzira kumusoro tanera tende
Children Tipi tende
• Football musoro yokudhinda, zvakanaka chaizvo kuti kukwidziridzwa.
• Strong uye rakasimba mubato pabutiro kurova-rova.
• Logo aigona kudhindwa pabutiro kurova-rova.
• Waterproof pasi, nyoro musabata kunzwa.
• Other zvakagadzirwa inowanika pamusoro chikumbiro
• Other kwemavara inowanika pamusoro chikumbiro
Top zvinhu: 100% polar nemvere
Middle zvinhu: Sponge
Pasi zvinhu: Eva
Kuvaka Top layer Middle layer Bottom layer Technology for stick
Tine yakaoma mutemo rokuongorora. All zvinhu achaparadzwa akaongorora vose rakapedzwa zvigadzirwa zvichabviswa iongororwe mumwe nomumwe pamberi zvacho. Unogona kuziva kana nokutengesa yako kuti rokuongorora kuti zvinhu vako vachiongorora kana paine default chimedu. Hazvina zvinogoneka kuti 100% mishonga yavo kundochingamidza mureza.
Most mishonga yedu zvakatipoteredza ushamwari. Asi musika sezvo akasiyana ane zvakasiyana chinodiwa, ndapota tarisa mashoko nesu. Unogonawo ngatiregei kuziva vamakananga musika, ipapo tinogona kupa ruzivo maererano.
The Odha uwandu kuvimba siyana zvinhu uye chigadzirwa akadzama. Kazhinji kubva 500pcs kune 2000pcs, zvimwe zvinhu zvakawanda, vamwe zvishoma. Tapota kutirovera runhare nomumwe zvakasiyana chinhu.
Nokuti mimwe, kutungamirira nguva anenge 7 days. Nokuti vakawanda kugadzira, kutungamirira nguva mazuva 45-60 mushure mekugamuchira dhipoziti muripo. Kutungamirira nguva kunobudirira apo (1) zvatakawana dhipoziti wako, uye (2) tine chokupedzisira mvumo yenyu zvinhu zvenyu. Kana kwedu kutungamirira nguva haashandi wava yako, tapota endai pamusoro wako zvinodiwa netsvimbo dzedu. Muzviitiko zvose tichaedza achengete zvaunoda. Kazhinji tinokwanisa kuita kudaro.
Previous: Cartoon vana indoor uye Outdoor akarara bhegi
Next: plaid anodhinda chiedza uremu akarara sq
Picnic gumbeze chete Itai nyaya
Picnic gumbeze nomuchero musoro
Ongorora kugadzira panze kupikiniki bhurangeti
Cheap kupikiniki negumbeze rine mutsetse pakudhinda
plaid panze kupikiniki bonde isapinda
Kids mukwende kupikiniki bhurangeti